Incwadi ebhalwe nge-Autographed Giveaway! | Martech Zone
Incwadi enikezwa nge-Autographed!
NgoMsombuluko, Ephreli 23, 2007 Douglas Karr
Namuhla ngithole Incwadi kaChris Baggott eposini, woohoo!
Nansi-ke isivumelwano! Thenga ikhophi yencwadi kaChris ngokuchofoza encwadini kulokhu okuthunyelwe futhi ngizokunikeza enye incwadi emnandi, Kiss Theory Usale Kahle, kubantu bokuqala abangu-3 abathi ngithumele isixhumanisi sokuqinisekisa ukuthi bathenga incwadi. Izincwadi yilezi i-autographed nguBob Prosen uqobo!
Ngijabule ngencwadi kaChris ngezizathu ezimbalwa:
Ngibheke phambili ekufundeni le ncwadi. UChris ubelokhu esemgwaqweni kusukela lapho inkampani yakhe ukuqala ukukhuluma nokufunda kubathengisi be-imeyili emhlabeni wonke. Akungabazeki ukuthi incwadi izoba yi kuphela incwadi efanele ukufundwa nge-imeyili Marketing!
UChris ungumngani nomeluleki. Uvulekile, uthembekile futhi umane nje ungumuntu omuhle nxazonke. Mina noChris saba ngabangane masinyane lapho ngijoyina inkampani yakhe futhi ngangidabukile lapho eqala ukuqala kwakhe okusha (kepha uyazi ukuthi ngiyamjabulisa!)
Ngisencwadini! Kunengxenye enhle encwadini ezenzekelayo nokuhlanganiswa ebuzwe uChris U-Amol Dalvi nami ukunikeza impendulo ku. Kuhlole… Ngicabanga ukuthi sihlanganise izeluleko ezinhle Ama-API… Noma ngaphandle kwe-imeyili Marketing.
Ngiphinde ngibe nekhophi yesine ye-Autographed yeKiss Theory Good Bye ye Engtech, umfundi wesikhathi eside wale blog engatholanga ikhophi yencwadi lapho ahlala khona (izothunyelwa ngeposi ngesonto elizayo, Eng!).
Sibonga ngokukhethekile kuBob Prosen ngokuthumela ngomusa amakhophi encwadi yakhe ngemuva ngifunda isibuyekezo sami. Bengilokhu ngidlula incwadi yakhe emsebenzini nakubangani! Yincwadi enhle ngamasu obuholi nokuphatha azolingana nanoma iyiphi inhlangano.
Kungani iMelika ingalokothi ilazise iSoccer?
Ngo-Apr 24, i-2007 ku-1: i-31 PM
Ngiyabonga uDoug, ngilangazelela ukuyifunda.
Ngo-Apr 25, i-2007 ku-7: 48 AM
Ngingene. Ngikuthumele imininingwane yami futhi ngibheke phambili ekungeneni encwadini entsha kaChris, ikakhulukazi isimangalo sakho esisha sodumo.
Ngenkathi ngiphelile eBorder ngolunye usuku ngathola ithuba lokufunda izahluko ezimbalwa zeKiss Theory Goodbye, leyo futhi enye incwadi enhle kakhulu.